Challenge The Good News Paper - Chidhakwa Chakawaniswa Mumwezve Mukana (Shona)
Challenge Good News Paper - 81, 2016
Chidhakwa Chakawaniswa Mumwezve Mukana (Shona)
Duncan Olindo uyo aiva chidhakwa uye achiita mhirizhonga, aifunga kuti magumo ake raingova gehena roga
Kudhakwa ndoowaiva muraramire waDuncan Olindo uye muraramiro wake uyu waishungurudza ruzhinji, kusvika pazuva raakagamuchira mukana wepiri.
Duncan anoti "Pandakaroora ndine makore makumi maviri nemana, ndakanga ndatove chidhakwa chikuru" Anotizve "mudzimai wangu aishungurudzika nokuda kwokuti nguva zhinji aingova ega nokuti ini ndaigoteverana nedoro ndichimusiira basa rose rokuronga pamusha noupenyu."
Vemhuri yekwaakazvarwa Duncan vaingoti akatodza baba vake vachitofadzwa nemanwiro aaita doro. Duncan anoti "Baba vangu vaindipa mari yedoro asi havana kumbopa mudzimai wangu mari yokutenga chokudya kana kumbobatsirawo".
Nokufamba kwenguva Duncan akatanga kunwa doro zvakanyanya uyewo akanga oita mhirizhonga nguva dzose zvokuti akanga asisina chimiro mumana maaigara.
Duncan anoti "ndakakurira mumhuri yaitya Mwari uyendaiziva kuti Mwari vanoda kuti ndiitei. Zvino pandakatanga kunwa doro ndakabva ndatanga kuva munhu anemhirizhonga, ipapo ndipo pandakarasa tariro nokuti zvakava pachena kwandiri kuti ndiri mutadzi mukuru.
Duncan anoti "Ndaifunga kuti zvivi zvangu hazvaikwanisa kuregererwa. Ndakanga ndongomirira kufa nokutongerwa kuenda kugehena" Nerimwewo zuva apo Duncan akanga achinwa hake ari pabhawa, akanzwa munhu achiverenga Bhaibheri.
Duncan anorangarira kuti "Munhu aiverenga Bhaibheri uyu akanga achidzidza vhangeri panze uye aiverenga kubva mubhuku ya Isaya chitsauko chokutanga, ndima 18-20 (Isaiah 1:18-20) Ndima idzi dzinotaura kuti Mwari vanochenesa zvivi zvedu kusvika zvaita samazaya echando. Suti zvakanga zvisipo - kana tikauya kwaari tikasiya zvakaipa zvedu."
Mazwi aya abata Duncan zvokuti akaramba achifunga nezvawo.
Duncan anopupura nemoyo wakaremerwa achiti "Rimwe zuva ndirere ndakasvika pakupererwa ndikarova mudzimai zvokunge ndichamuuraya mhaka yake yakanga iri yokuti akanga anonoka kundivhurira musiwo.'
Vagari vemumana redu pavakanzwa kuti ndoozvandakange ndaita vakatsamwa zvokuti vakatsidza kuti kana mudzimai wangu akangofa chete neniwo vaizondiita kanyama kanyama.
Nokuda kwokutyira hupenyu hwemudzimai wake pamwe nehwake Duncan akarangarira ndima dzaakange ambonzwa ndookutendeukira kuna Mwari, ndokunamata achiti "Mwari kana mukadzokeredza hupenyu hwemudzimai hwangu, ndinokupai hupenyu wangu hwose"
Mwari vakanzwa munamato wangu, mudzimai wangu akapora izvo zvakaita vanhu vemumana varege kurwisana neni. 'Ipapo ndipo pandakaziva kuti Vaindida chero ndaiva mutadzi"
Manheru iwawo Duncan akaenda kumba kwaMufundisi ndokungogodza pamusiwo
Duncan anoti "Ndakaudza Mufundisi kuti zvenyika ndakwana nazvo ndaakuda Jesu Kristu. Mfundisi vakafunga kutI ndainge ndakdhakwa vakanditi ndiuye zuva raitevera mangwanani ndakaramba ndichitaura nyaya yangu zvokuti Mufundisi vakazotoisa munamato wokutendeuka, tapedza ndakanzwa kuremerwa kwose kuchipera pandiri ndakanzwa rugare rwaMwari mumoyo mangu"
Parizvino Duncan aakuraramira nokutevera Kristu misi yose uye atova Mufundisi wekereke. Paakarega kunwa doro nokuita mhirizhonga mudzimai wake akashamiswa nazvo naiyewo akabva aitawo mutendi.
Duncan anoti "hama dzangu hadzina kufara kutendeuka kwangu , chero zvazvo vakandidzinga kubva pamba pangu vachiti ndakanga ndapandukira chitendero chavo vakatisiya tisina chokubata, ndinoziva kuti Mwari vanopa'.?
<< ’n DRONKAARD KRY ’n TWEEDE KANS (Afrikaans)
Don’t let them tell you who you are >>